Yintoni omele uyenze ukuba iapp evela kuGoogle Play ayikhuphelwanga | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Xa ukhuphela usetyenziso kwi-Android, Sisebenzisa iVenkile kaGoogle yokuDlala njengendawo yesiqhelo. Sinokusebenzisa ezinye iivenkile ezizezinye, ukuba sinezimbalwa ezikhoyo. Xa sikhuphela usetyenziso kwifowuni, into eqhelekileyo kukuba yonke into ihlala ihamba kakuhle. Nangona kukho amaxesha apho ukhuphelo lungagqitywanga, okanye sibona nje ukuba asinakho ukukhuphela usetyenziso.
Kutheni lento isenzeka? Inyani yile yokuba kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni le nto inokwenzeka kwifowuni. Kodwa ukuba sisixhobo esikuyo ukuzama ukukhuphela kuGoogle Play ayikhupheli, Sinokhetho oluninzi. Ke ekugqibeleni masiyikhuphele. Kodwa kuya kufuneka ujonge izinto ezininzi.
1 Jonga ukugcinwa
2 Qalisa kwakhona ifowuni
3 Cima idatha yeGoogle Play
4 Ukhuphelo lwe-APK
Enye yezinto zokuqala ekufuneka sizenzile gcina engqondweni ukuba sinendawo eyaneleyo ekhoyo. Kuba sinokuzama ukukhuphela usetyenziso kuGoogle Play, kodwa akukho sithuba saneleyo emnxebeni. Ke olu khuphelo alunakwenzeka nanini na, njengoko unokucinga. Ngethamsanqa, le yinto esinokuyibona kwi-Android usetyenziso ngokwalo, apho indawo iboniswa khona.
Kwakhona, ukuba sinengxaki ngendawo ekhoyo kwifowuni yethu ye-Android, kukho isisombululo esifanelekileyo. Kuba akufuneki siyilibale into eyenzayo kwiinyanga ezimbalwa yaziswa kuGoogle Play amathuba okuba cima iiapps ezininzi ngexesha elinye, ngaphandle kwesidingo sengcambu. Ke sinokuvula indawo ngokususa ezinye ii -apps esingafuni kuzisebenzisa. Le yinto ekufuneka sisoloko siyikhumbula, kuba isenokuba sesona sizathu.
Uyilungisa njani ingxaki yokukhuphela kwiGoogle Play
Qalisa kwakhona ifowuni
Esinye sezona zisombululo zibalaseleyo kwiingxaki ezininzi ezenzeka kwi-Android. Singayisebenzisa kwimeko apho singenakho ukukhuphela usetyenziso kwiGoogle Play kwi-smartphone yethu. Mhlawumbi enye yeenkqubo zivaliwe kwaye inika iingxaki malunga nokusebenza. Ke, ukuqala kwakhona ifowuni kuhlala kucetyiswa. Zonke iinkqubo ziyayeka. Yonke into iya kuqala ngaphezulu, ngale ndlela.
Ngoko ke, xa ifowuni iqalile, Kuya kufuneka sibuyele kuGoogle Play kwaye sizame ukukhuphela usetyenziso olwenziweyo. Kwiimeko ezininzi kufuneka isebenze ngesiqhelo. Ke siya kuba nakho ukufikelela evenkileni kwakhona kwaye sinokuba nale app kwi-smartphone yethu ye-Android njengoko besifuna.
Cima idatha yeGoogle Play
Ingxaki eqhelekileyo kukuba kufuneka ucime idatha kwi-Android app, ngenxa yokungasebenzi kakuhle kuyo. Kungenzeka kwimeko kaGoogle Play. Ke loo datha kufuneka icinywe. Isenokuba yindawo yokugcina i-app ebangela iingxaki. Kuyenzeka ukuba uyicime nangaliphi na ixesha. Ngale ndlela, inkqubo ayitshintshi xa ithelekiswa nento ekufuneka siyilandele nezinye ii -apps.
Ke landela la manyathelo. Nantsi indlela abaza kwenza ngayo Uyakwazi ukucima idatha okanye i-cache kwiGoogle Play Store kwi-Android. Xa iapps iqalile kwakhona emnxebeni, yonke into kufuneka isebenze kakuhle kwaye unganayo usetyenziso kwifowuni. Ngokwesiqhelo sisisombululo ekufanele ukuba sibhenele kuso kwezinye iimeko. Ngokukodwa ukuba isixhobo sisetyenzisiwe kakhulu okanye ixesha elide. Kuba ilunge ngakumbi kolu hlobo lwemeko.
Kungenzeka nokuba sizama kangakanani, asizokwazi ukukhuphela le app kuGoogle Play kwifowuni. Kwimeko enjalo, Sinokubhenela ekusebenziseni ii-APKs. Kuba sinezinye iivenkile, njengoko besesitshilo. Kuninzi lwezi venkile sifumana iiapps esinazo kuGoogle Play. Kule meko kuphela siyabafumana ngqo kwifomathi ye-APK.
Abasebenzisi abaninzi abazithembi ezi ntlobo zeevenkile. Nangona ezo ziboniswe kuluhlu zikhetho olukhuselekileyo. Ke unokukhuphela usetyenziso ngaphandle kweengxaki. Yintoni egqithisile, Kukho iindlela zokujonga ukuba i-APK ayisiyonyani okanye hayi. Ukuze ungakhupheli nantoni na eyingozi kwifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Kufuneka wenze ntoni ukuba isicelo asikhuphelwanga kuGoogle Play
Uyicwangcisa njani i-APN yomqhubi wakho kwi-Android